NABY KEITA - Cayaaryahanka xulka Guinea iyo kooxda Red Bull Leipzig - BBC News Somali
Naby Keita ayaa xilli cayaareedka 2016-17-ka ee horyaalka Jarmalka ku billoowday isagoo aan la aqoonin balse wuxuu xilli cayareedka ku dhameeystay isagoo kamid noqday cayaaryahaanada sannadka ee horyaalka Bundhesliigaha, waxayna taaas ugu suuragashay kadib markii loo codeeyay, wuxuuna helay codadkii ugu badnaa ee la siiyay cayaaryahaanada tartanka khadka dhexe kula jiray.
Red Bull Leipzig waxay xilli cayaareedkii 2016-17-ka ay noqotay koox la yaab leh waxaana kooxdan oo ku cusbeyd ka qeybgelidda horyaalka ay ku dhameeysatay booska 2-aad ee horyaalka Bundhesliigaha, waxaana ay sidoo kale qeyb ka noqotay kooxaha sannadkan ka qeybgalaaya tartanka huryoolka Yurub ee Champions League-ga.
Cayaaryahanka reer Guinea ee khadka dhexe uga dheela kooxda Red Bull ayaa gacan ka geystay in kooxda ay ku dhameysato booska 2-aad ee kala horaynta kooxaha.
Cayaartii ugu horaysay ee horyaalka Bundhesliigaha ee uu ka qeyb qaatay Naby Keita wuxuu gool dhalliyay daqiiqadii 89-aad, goolkaas oo u horseeday kooxda in ay ka guulaysato Borussia Dortmund, waxayna taasi caawisay cayaaryahanka iyo kooxda. xilli cayaareedkaas.
Keita Wuxuu kooxda Red Bull Leipzig kaga soo biiray dhanka dalka Austria oo uu ugu ciyaari jiray Red Bull Salzburg.
Guud ahaan wuxuu dhalliyay 8 gool (Mid kamid ah goolashiisa waxaa lagu daray goolashii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkaas), wuxuu sidoo kale todobo jeer gacan ka geeystay dhallinta 7 gool. Qaab ciyaareedka wanaagsan ee Keita ayaa indhaha soo jiidanayo.
Si aad ugu codeyso halkan dhag sii
Waa cayaaryahan khadka dhexe ka dheela, wuxuuna u dhexeeyaa labada gool ee garoonka. Wuxuu burburiyaa weerarada taas oo sababtay in lagu tilmaamo in uu yahay cayaaryahan labo cayaartoy u dhigmo. Cayaaryahankan oo aysan kubaddacagtiisa ku daaheynin ayaa ah cayaaryahan ay inta badan jeclaan lahaayen tababarayaasha in uu kooxohooda ka mid noqdo.
Keita wuxuu adeegsadaa awoodiisa, sida jirkiisa iyo aragiisa si uu kaga guulaysato kooxaha ay kulamada ay la yeeshaan, si uu gool uga dhalliyo amaba uu door uga qaato dhallinta goolasha.
Waxaa cajiib ah in tababarihiisa kooxda Leipzig, Ralph Hasenhuttl ayaa waxaa ku tilmaamay in uu yahay cayaaryahan lagama maarman ah ayna xirfadiisu tahay mid aan caadi ahayn.
Xiddigan reer Guinea wuxuu soo jiitay indhaha kooxda Liverpool, waxaana lagu waday in kooxda ay la soo wareegto bisha July ee sannadka soo socda ee 2018-ka.
Keita wuxuu kujiraa liiska cayaaryahaanada ay kooxda sida aadka ah uga qeybgeliso kulamada maadama xulkiisa Guinea ay ku adkaatay in uu soo baxo ka qeybgelida tartanka koobka adduunka ee lagu qaban doono dalka Ruushka, sannadka soo socda ee 2018-ka.
Keita wuxuu xulka dalkiisa u dhaliyay goolal badan xilligii isreebreebka uu socday, wuxuuna ka badiyay Libya iyo Tunisia.
Waxaa uu sheegaaya in cayaaryahanka Afrikaanka ah ee uu ku daydo uu yahay Yaya Toure. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah cayaaryahankan khadka dhexe ka dheelo maku dayan karaa xiddiga reer Ivory Coast, oo ma ku guuleysan karaa abaalmarinta cayaaryahanka Sanadka Afrika ee BBC?